Mudaharaad looga soo horjeedo midabtakoorka oo ka dhacay magaalada Minneapolis -
Waxaa magaalada Minneapolis ka dhacay mudaharaad looga soo horjeedo midabtakoorka ku soo batay dalka Mareykanka.
Dad ay tiradoodu kor u dhaaftay kun (1,000) qof ayaa xiray qaar kamid ah wadooyinka iyo gaadiidka magaalada Minneapolis.
Waxaa aad ugu soo batay dalka Mareykanka dembiyadda iyo falalka la xiriira midabtakoorka ilaa iyo markii la doortay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump.
Maalintii Axada ahayd ayaa hal qof uu ku dhintay, 19 kalana ay ku dhaawacmeen markii baabuur la jiirsiiyey kooxo iska soo horjeeday oo ku banaanbaxayey magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Banaanbaxa qofka lagu dilay, kuwa kalana lagu dhaawacay ayaa waxaa soo qaban qaabiyay kooxaha cadaanka xag-jirka ah ee ay ku weyntahay caddaannimada, halka kooxda kale ee baabuurka lala beegsadayna ay ahaayeen kuwo ka soo horjeeda.
Dadkii mudaharaadkan ka qaybgalay ayaa wadooyinka y xireen ama ay ku lugaynayeen waxaa kamid ah jidka weyn ee loo yaqaano Cedar, jidkaas oo ku yaala ama dhexmara xaafada ay ku badantahay Soomaalidu ee Cedar.
Xigashadda Sawirka: StarTribune
Related Items:Featured, world, world news